China Liquid Filling Machines, Masters Capping, Marking Machines Sale - NPACK
Famaritana ny milina
Sampan-draharaha mialoha ny varotra
Fanofanana fitaovana sy fanaraha-maso kalitao
Fametrahana sy fampiofanana
Ahoana ny fifidianana ny famenoana milina?
Ahoana ny fomba hifidianana milina fanoratana?
Ankoatra ny kalitao sy ny serivisy, manana vondrona tolo-tànana izahay mba hanomezana fanampiana avy amin'ny varotra ...
Quality Assurance 1, Fiantohana ny fitaovana omen'ny orinasa misy antsika dia vaovao tsy ampiasaina amin'ny fampiasana ny endrika fanorenana farany ...
ONE SOLUTION STOP
Ny NPACK dia matihanina amin'ny famolavolana, famokarana, fanangonana, fametrahana ary famoahana karazana vary, vovoka ...
Shanghai Zhiquan Automation Equipment Co., Ltd. dia mpamokatra matihanina amin'ny karazan-tsakafo, vovoka, pasteo, grafofaingon-koditra. Ny milina masintsika dia ampiharina amin'ny isan'andro-chemical, cosmetics, pesticides, solika, sakafo, zava-pisotro, indostria ary indostria hafa.
Kitapo misy randran-doko vita amin'ny rotaka
Product Description Round Bottle Rotary Capping Machine Ity milina iray ity dia manambatra tavoahangy, kapa-sorter, cap-elevator, kapila ary tavoahangina tanteraka amin'ny iray. Ny rafitra rotana, manangona ny rindrina ao amin'ny toerana iray, azo itokisana sy azo antoka. Tsy mampidi-doza ny tavoahangy sy ny tavoahangy. Ny fahombiazan'ny kapaoty, ny taham-pahaizana ambony, ary ny halavirana ...
Product Description 1. Ny votoatin'ny fangatahana fampiharana dia tsy mitovy amin'ny singa boribory goavam-be ao amin'ny sakafo, ny fanafody, ny zavatra simika isan'andro sy ny indostria maivana hafa. 2. Fanamboarana fitaovana elektrika kabinetra, fitaovana fampitaovana, singa tavoahangy samihafa, fitaovana fanoratana miloko, fitaovana famantarana ny vilany, 1 # marika fanoratana, rafitra rafitra sy rafitra fanaraha-maso; 3. Fitaovana fiasa fiasa 1) Rafitra fanaraha-maso: Ampiasao ny marika SIEMENS ...
Toeram-pisotroana savony ara-toekarena ara-toekarena
Fitaovana: Fanafody famonoana solika fiompiana fako ara-dalàna dia mety amin'ny famenoana ny ranon-drongony, toy ny crème, lotion, shampoo, saosy, tantely, ketchup, ary ranon-drongony hafa. Manam-pahefana amin'ny alalan'ny ordinatera (PLC), fanaraha-maso fanaraha-mony. Feno tanteraka ny endriny, famenoana ny fanamafisana, ny mari-pahaizana marina. Ny singa mampifanolana sy lafatra, ny cylinder sy ny rivotra dia mora miala ary ...
Famoahana Machines ho an'ny Chemical
Famenoana machinara ho an'ny sakafo
Famenoana ny milina famokarana fitaovana ao an-trano
Famenoana fiara ho an'ny vokatra enti-mikaroka
Famenoana ny milina fanaovana dokam-barotra sy biomedical
Fandefasana horonantsary milina fiara
Adiresy: Zhuangxi Industrial Zone, Vondrona 8, Zhuangxi Village, Guizhuang, Shaxi Town, Taicang, Jiangsu, China (Mainland)
Technical Support Hangheng.cc |XML Sitemap